Skinning - Torolàlana WoW | WoW Guides
Con hoditra afaka ianao angony ny hoditra amin'ireo biby sy biby tantinao resy.
Ady ho an'ny torolàlana momba ny hoditra Azeroth: Lalam-pambolena tsara indrindra
Aloha! Amin'ity torolàlana Skinning in Battle for Azeroth ity dia hasehonay anao ny làlana tsara indrindra hiompiana amin'ny sari-tany ...
Aloha! Amin'ity Torolàlana momba ny hoditra ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianatra anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra mankany ...
Torolàlana momba ny hoditra amin'ny legiona 1-800 - Ahitana iraka
Tsara! Amin'ity toro-lalana ity dia asehonay anao tsikelikely ireo iraka rehetra momba ny Skinning ao Legion. Fenoy ny rojon'ny ...
Draenor Skinning Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Draenor Skinning izay hanampianay anao hahatratra ny ambaratonga 700.
Ity torolàlana ity dia hampianatra anao ny fomba haingana sy mora indrindra hampakaranao ny asanao Skinning manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 600. Aza hadino fa ity torolàlana ity dia tsy natao hanamboarana volamena amin'ny Skinning, fa torolàlana tsotra fotsiny izay mampiseho anao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny Skinning anao . Natao ho an'ireo mpilalao ambaratonga ambony izay te hanova ny asany amin'ny ambaratonga avo lenta izany, saingy tsy midika izany fa tsy tsara ho an'ny mpilalao ambany izany. Ho mora ny fampiakarana ny hoditrao, fa tena mankaleo. Tsy maintsy hivezivezy ianao ary hanakorontana vahoaka an-jatony na andian-jatony mihitsy aza. Ny Skinning dia mifangaro tsara amin'ny Skinworking.
Mariho fa na mena sy voasary ho anao aza ny andian'olona dia TSY manome toky anao izany fa hampiakatra hevitra ianao. Azo inoana kokoa izany, fa aza manantena izany foana.
Ity iray ity Torolàlana momba ny hoditra Haneho anao ny fomba mora sy haingana indrindra hampisondrotana ny asanao amin'ny maha-mpanao hoditra anao amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 450. Nohavaozina tamin'ny patch 3.2. Izy io dia torolàlana natao ho an'ny olona ambony, izay te hanova ny asany, saingy tsy voahilika ho an'ny olona ambany izany. Mandrosoa satria mamela anao ny haavonao. Ny fampiakarana ny haavon'ny hoditra dia mora fa ho mora kokoa sy ho haingana kokoa raha manaraka an'ity torolàlana ity ianao.
Ny fampifangaroana tsara indrindra amin'ny asan'ny hoditra dia mazava ho azy fa ny hoditra, azonao atao ny manaraka ny anay Torolàlana momba ny hoditra hianika an'io asa io.
Miaraka amin'ny famosaviana Formula: fonon-tanana enchant - fihodirana Azonao atao ny mampitombo ny fahaizanao mando hoditra amin'ny 5 mba hahafahanao manana fahavalon'ny hoditra amin'ny avo kokoa noho izay azonao atao. Toy ny asa fanangonana hafa rehetra, toa Herbalism y fitrandrahana, tsy misy famerana ambaratonga.
Fizarana torolàlana momba ny hoditra:
75-155 / 165 Ny Barrens, Loch Modan ary ny faritra mando
155 / 165-205 Fanjaitra an'arivony sy Tendrombohitra Arathi
205-300 Kawahin'i Un'Goro sy Feralas
300-360 Saikinosy Hellfire sy Nagrand
360-450 Boreal Tundra sy Sholazar Basin